स्मार्टफोन र ट्याब्लेट नेक्सस एक समयमा मोबाइल बजार मा हल्ला धेरै गरे। यो कुरा यी उपकरणहरू तिनीहरूलाई सबैभन्दा उन्नत सफ्टवेयर प्राप्त गर्न अनुमति दिने, Google को auspices अन्तर्गत जारी गरिएका छ। साथै, ग्याजेटहरू आफूलाई स्पष्ट तिनीहरूलाई खरीदारों को आँखा मा थप गुणस्तर बनाउँछ जो, एकदम चिरपरिचित निर्माताहरु जारी छन्। र मुद्रा को लागि मूल्य र उपकरणको सञ्चालनको स्तर आफ्नो पक्षमा स्पष्ट छ - कम से कम यो नेक्सस5र7को समीक्षा द्वारा पुष्टि हुन्छ।
प्रस्ट छ, लाइन जारी छ। अपेक्षाकृत हालै , गुगल निर्दिष्ट संग नै नाम को अर्को मोडेल को सुरूवात घोषणा। यो HTC नेक्सस9यो एक निर्माता उपकरणको उत्पादन मा लगे लागि बुझे गर्न सकिन्छ शीर्षक लागि।
नयाँ उत्पादन बारेमा थप जान्न, यो लेख पढ्नुहोस्।
हामी सामान्य मा उपकरणको बारेमा जानकारी सुरु। यो एन्ड्रोइड 5.0 अपरेटिङ सिस्टम पहिलो अद्यावधिक जारी मात्र यदि किनभने विचारणीय छ। प्रकाश टोन को बरु "epplovskih" gradients मा गरेको सबै - यो जुन हामीले HTC नेक्सस9को उदाहरण द्वारा कुनै परम्परागत "androidovskih" कालो पृष्ठभूमिका छ हेर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन गर्न पूर्ण अलग दृष्टिकोण, हो।
र devaysa को सुरूवात नयाँ अपरेटिङ सिस्टम को प्रस्तुति संग coincided देखि, यो अचम्मको विकासकर्तालाई अधिकतम गर्न थाली लैस, राम्रो हार्ड मा काम गरेको छ भन्ने छ।
अर्कोतर्फ, गुणस्तर लागि भुक्तानी गर्न छ। यो धेरै (लगभग डबल) नयाँ HTC गुगल नेक्सस9को आधार मूल्य उठाएको भन्ने तथ्यलाई द्वारा कारणले यो ट्याब्लेट उपकरण स्पष्ट गरेको छ अब शायद एक "बजेट" - यो $ 400 शायद यो आईप्याड एयर मूल्यहरु पछि छ र लागत।
सँगै स्मार्टफोन संग
"नेक्सस" को गोली पीसी लाइन संग समानान्तर विस्तार भएको छ र 6th मोडेल स्मार्टफोन को रूप मा प्रस्तुत। उनको विज्ञप्ति मोटोरोला मा लगे थियो, र फोन साँचो अघिल्लो मोबाइल को "हकदार" भएको छ - नेक्सस 5।
यो लेखको रूपरेखा यो उपकरण प्रयोग गरेर हामी दुर्घटना द्वारा सम्झना। उहाँले, ट्याब्लेट संग, हामी वर्णन गरेका छन् वास्तवमा फरक कि बहुमुखी प्रतिभा, गुण र उच्च मूल्य पर्याप्त उपकरणहरू उत्पादन कि Google र प्रसिद्ध निर्माता देखि ग्याजेटहरू नयाँ पुस्ता छ।
तर, हामी मोडेल को नकारात्मक सुविधाहरू छोड्न र, ट्याब्लेट HTC नेक्सस9वर्णन यो छ रूपमा।
बक्समा सुरु हुने ...
बैठक प्रत्येक ग्राहक लागि नयाँ हाते उपकरण संग बक्स सुरु हुन्छ। यो एक ट्याब्लेट वा स्मार्टफोनको व्यापार कार्ड एक प्रकारको छ। हामी नेक्सस7भित्र devayse कुनै पनि प्रभाव सिर्जना बिना unremarkable आयताकार बक्स आउँछ कि सम्झना। को "नौ" कुराहरू को मामला मा हो फरक - डिजाइनर को प्रयोग र वर्तमान प्याकेजिङ्ग गोलाकार किनाराको संग जाने निर्णय गरे।
खुलस्त, यो विकल्प देखिन्छ रोचक र असामान्य - वास्तवमा के भित्र लुकेको छ जान्न चाहन्छु। र नयाँ को रंग अपरेटिङ सिस्टम सबै एन्ड्रोइड उज्ज्वल रंग मा 5.0 प्याकेज दृष्टिकोण, गरेको छ।
को खोल "एन्ड्रोइड" छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद त्यहाँ सदृश भनेर आईप्याड मिनी केही छ उपकरणको डिजाइनमा, iOS को शैली मा सजाया छ। ट्याब्लेट मा फिर्ता आवरण हातमा राम्रो छ जो अपारदर्शी सेतो प्लास्टिक, बनेको छ। यसमा, दोस्रो-पुस्ता नेक्सस7लेखिएको को मामला मा रूपमा flaunts दृढ - उपकरणहरू को नाम लाइन।
लागि थप गढ पक्ष प्यानल धातु थाली, स्पष्ट यसलाई थप हामी थाह छ, प्रयोगकर्ताहरूले पक्षले चिप्स र चर्किएको याद जो, "सात", को पृष्ठभूमि मा शोषण गर्न लाभदायक बनाउँछ जो छन्।
HTC नेक्सस9मा अघिल्लो पुस्ता भन्दा ठूलो स्क्रीन, विकर्ण 8.9 इन्च छ। प्रस्ट छ, यो एक वास्तविक समझौता दुईवटा उद्देश्य हासिल गर्न अनुमति दिन्छ: एक ठूलो स्क्रीन संग एक ग्याजेट परिचय र यो ट्याब्लेट शरीर बढ्तै ठूलो बनाउन गर्दैन। अर्कोतर्फ, एक समान उत्पादन उत्पादन, Google स्पष्ट नै आयाम ग आईप्याड मिनी प्रतियोगी सिर्जना गर्छ।
प्रदर्शन उपकरण विशेष सुरक्षा गिलास लेपित छ गोरिल्ला ग्लास3जो, को विशिष्टीकरण मा भन्यो, blows, खरोंच र छिल देखि स्क्रिनको भित्री भाग रक्षा गर्न अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, पहिले नै प्रदर्शन सतह संग एक ट्याब्लेट प्रयोग गर्दै गर्नेहरूलाई देखि प्रशंसापत्र, यसलाई अस्वीकार। पनि यो समाधान केही परिस्थितिमा काम गर्दैन, त्यसैले तपाईं यसलाई भर हुँदैन।
HTC नेक्सस9स्क्रिन संकल्प 2048 1536 (जो, आफ्नो आकार दिइएको प्रति इन्च 281 को एक पिक्सेल घनत्व उत्पन्न) द्वारा छ। सायद संख्या धेरै प्रयोगकर्ताहरू यसलाई कुनै अर्थ छैन सक्छ, तर व्यवहार मा यी विकल्पहरू सम्भव रंग को पूर्ण प्रसारण दायरा सुनिश्चित गर्न, साथै एक उच्च-सटीक छवि देखाउन बनाउन। यो ट्याब्लेट पढाइ र भिडियो र रंगीन खेल हेर्दै लागि दुवै फिट छ।
हामी HTC ट्याब्लेट नेक्सस9(एलटीई) आफ्नो उच्च प्रदर्शन उल्लेख हुन सक्छ कि अन्य उपकरणहरू संग तुलना भने। यो कारणले गर्दा को राम2जीबी राशि, र एक उच्च घडी प्रोसेसर को 2.3 GHz (2 केन्द्रक) मा गति हासिल छ। तुलना लागि - मा नेक्सस71.6 GHz एक आवृत्ति संग 4-कोर प्रोसेसर थियो। प्रस्ट छ, विकासकर्तालाई ट्याब्लेट को "हृदय" थप शक्तिशाली, कि छ, पाठ्यक्रम बनाउन यसको प्रदर्शन मा सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शन गर्न व्यवस्थित छन्।
HTC नेक्सस9उच्चतम गुणस्तर मा कुनै पनि खेल खेल्न धेरै सजिलो छ - उच्च शक्ति को दैनिक काममा यो सूचना devaysa सजिलो छ। अर्को कुरा अब, यो मोडेल मा समीक्षा को एक नम्बर देखि विशेषज्ञहरु अनुसार, बजार बस वास्तवमा प्रोसेसर डाउनलोड गर्न सक्छन् भनेर एउटा अनुप्रयोग छैन भन्ने छ। त्यसैले, यो खेल उद्योग को विकास को यस चरण मा, जस्तै क्षमता अत्यधिक छ, सम्भव छ।
उच्च उत्पादकत्व बावजूद, उपकरण पनि स्वतन्त्रता को एक पर्याप्त स्तर छ। यो मुख्यतया 6.700 mAh को क्षमता बराबर छ जो ब्याट्री, माध्यम हासिल छ। दोस्रो - हामी, शुल्क प्रवाह अनुकूलन बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट एकदम सञ्चालन समय विस्तार गर्नुहोस्।
ग्याजेट अभ्यास उच्च लोड स्तर को बारेमा9घण्टा रहन्छ मा (कम से कम, यो निर्माता अनुसार छ)। तपाईं समीक्षा विश्वास छ भने, ट्याब्लेट एकल शुल्क मा 1,5-2 दिन "सुत्छन्" गर्न सामान्यतया सक्षम छ। यस Android-उपकरणहरूको लागि एक एकदम राम्रो सूचक हो।
हामी नेक्सस7मा, पहिलो पुस्ता mediocre शट देखाए जो फ्लैश, बिना स्थापित5मेगापिक्सेल क्यामेरा थियो सम्झना। सिद्धान्त मा, नवौं मोडेल को मामला मा सानो परिवर्तन भएको छ।
को HTC Google मा नेक्सस9कि एलईडी फ्लैश आउँछ एउटा 8 मेगापिक्सेल क्यामेरा स्थापित। उत्तरार्द्ध कम प्रकाश तस्बिरहरू सिर्जना केही रंग सुधार दिन्छ, तर सारा रूपमा स्थिति सुरक्षित छैन।
परीक्षण गरेर देखाइएको, ट्याब्लेट कोठामा मा ध्यान एकदम स्पष्ट चित्र बनाउन मौका नदिई, स्पष्ट ढिलाइ काम गर्छ। साथै, कहिलेकाहीँ खराब फोटो मा रंग हस्तान्तरण।
तर, प्रयोगकर्ता देखि प्रतिक्रिया संकेत रूपमा, केही ट्याब्लेट कम्प्युटर तस्बिरहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्दछ, त्यसैले फोटो उच्च गुणवत्ता को कुनै एक चाहनुहुन्छ।
पहिले नै उपकरण सामना, उल्लेख नयाँ अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड 5.0 ललिपप (विकास devaysa को समय मा)। धेरै अर्थमा, यो अघिल्लो संस्करण (KitKat) इन्टरफेस डिजाइन मुद्दा मा भिन्न हुन्छ। तार्किक संरचना (सेटिङ मेनु, र अन्य), हेर्नुहोस् यो बिन्दुबाट लागि जाँदा, परिवर्तन अवलोकन छैन।
अब HTC नेक्सस9(एलटीई) कारण नयाँ लक स्क्रिन र किबोर्ड गर्न iOS मा उत्पादनहरु समान भएको छ।
नयाँ ओएस संग काम को सुविधाको लागि, यहाँ राय diverge। केही संस्करण5मा रन अझ सहज संगठन गर्न सजिलो कारण बन्न भनेर तर्क। अरूलाई नयाँ अपरेटिङ सिस्टम को अस्थिरता भन्न र अघिल्लो संस्करणमा एक रोलबैक गर्न आवश्यकता जोड।
उपकरण बढि पूर्ण समझ को लागि, यस लेखमा, तपाईं जो बारेमा कम से कम, समीक्षाएँ छोड्न HTC गुगल नेक्सस9खरीदारों कम्तिमा सारांशित जानकारी दिन पर्छ, त्यसैले हामी कम्तिमा थप objectively एक प्रकट यो एकाइ भनेर बुझ्न सक्षम हुन।
निस्सन्देह, सबै सिफारिसहरू को सबै भन्दा सकारात्मक छ। खरीददारों, उपकरण कदर हामी माथि सूचीबद्ध छन् कि सद्गुण लागि उहाँको प्रशंसा। एकै समयमा हामी इच्छुक छन्, र HTC नेक्सस9कमजोरी (32gb एलटीई)। तसर्थ, हामी मान्छे लेख्न के आधारमा ट्याब्लेट कमीकमजोरी, पहिचान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सबै को पहिलो, यो, को पाठ्यक्रम मूल्य छ। हो, उपकरण मुद्रा को लागि धेरै राम्रो मूल्य छ, तर यो को लागत iPad बाट छैन धेरै फरक छ किनभने, प्रयोगकर्ताहरूले अक्सर उत्तरार्द्ध पक्षमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। थप बेफाइदा मान्छे छेउमा प्यानल काम मात्रा समायोजन कुञ्जीहरू कल। सिफारिसहरू तिनीहरूले प्राप्त गर्न कठिन कारण उपकरण प्रयोग गर्दा, यी बटनहरू प्रयोग को जटिलता नेभिगेट मा देख्न सकिन्छ कि उल्लेख गरे। साथै, तिनीहरूले थिचिएको गर्दा बुझ्न धेरै गाह्रो छ।
को ताप प्लेट अर्को drawback गणना गर्न सकिन्छ। उहाँले महत्वपूर्ण थियो - संचालन समयमा औंलाहरु, को पाठ्यक्रम, निकाल छैन। यद्यपि, यो किनभने खेल वा कार्यक्रम रूपमा ट्याब्लेट स्क्रिनको आकार मेल गर्न यस्तो तरिका मा चलिरहेको को ग्राफिक्स को रूपान्तरण पूरा गर्न आवश्यकता को हुन्छ। हामी उल्लेख रूपमा, गैर-मानक संकल्प सबै दोष। र रूपान्तरण जो प्रक्रियाहरू को ठूलो संख्या गरिन्छ, र (अक्सर) ग्राफिक्स गुणस्तर हराएको छ, बाहिर छ देखि। HTC नेक्सस9ट्याब्लेट (32gb एलटीई) को काम बारे अन्य टिप्पणीहरू, कम से कम केही प्रयोगकर्ताहरू, हामी पहिचान गर्न सकिएन बाँकी।
यस लेखमा हामी खरीदार नयाँ नेक्सस नवौं पुस्ता के प्रसन्न तुल्याउन सक्छौं वर्णन। यो उपकरण जसद्वारा को प्लेट थप राम्ररी सकिन्छ, (7 शृंखला को मोडेल तुलनामा) धेरै सुधार संग जारी छ टिप्पण लायक छ। कमीकमजोरी यो स्पष्ट कम छ, तर तिनीहरूलाई (मूल्य) को एक आफ्नो "नेक्सस" खरिद गर्न खरीदार बाटो मा एक गम्भीर अवरोध हुन सक्छ।
खैर, यो सक्छन् रूपमा कि, HTC नेक्सस9(32gb) इलेक्ट्रनिक्स को दुनिया मा एक अनुभूति भयो हुन, उत्पादन जो सबै अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले, तपाईं बस मोडेल बेच्न कसरी राम्रो हेर्न प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, र यो Google र HTC सफलता अपेक्षा गरिनेछ कि। यन्त्र, यसको डिजाइन र कार्यक्षमता गुणस्तर दिइएको, हामी साँच्चै संसारभरि लोकप्रिय बन्न छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।
को प्लेट र आफ्नो पैसा खर्च गर्न चाहे के हुन्?
Camcorder पानासोनिक कोर्ट V500: ग्राहक समीक्षा
एक टोप मा भिडियो क्यामेरा: एक साइकल वा मोटरसाइकल लागि DVR चयन गर्न कसरी
Orsk आकर्षण रूसी Hinterland
सामाजिक विनिमय को सिद्धान्त: सार र आधारभूत प्रावधान
तुला महिलाहरु को लागि पत्थर
आहार 5P: pancreatitis लागि हप्ताको लागि मेनु। चिकित्सकीय आहार नम्बर 5P
एक स्वादिष्ट खरायो कसरी खाना पकाउनु? सुझाव र राज
मोती बनेको कलर: एक नयाँ प्रवृत्ति
मानव इशाराहरू र आफ्नो अर्थ। मानव इशाराहरू कसरी बुझ्न
Stanislav Galimov - रूसी मारो